UkuYilwa kweWebhusayithi ngokwezifiso-Izigidi eziMenzi
Iiwebhusayithi ezenzelwe wena. Sisebenza kunye nawo onke amashishini.
Ukuhanjiswa okuKhawulezayo kwaye uya kufumana
Uyilo olwenziweyo nolwahlukileyo
Ungeniso lwasimahla lwasekhaya
Ii-imeyile zasimahla (ii-Ids ze-imeyile ezi-5 ezinendawo engama-5 GB nganye)
Ulawulo lokufikelela kwePaneli
Oko sikwenzayo Iipakethi
Ezinikezelweyo kunye neeseva zamafu
Ngaphezulu kweeprojekthi ezili-1000 + ezigqityiweyo kwaye ziqhubeka nokubala ...
Esikwenzayo kuHlelo lweeWebhusayithi eziCwangcisiweyo
Umphathi weAkhawunti yoYilo
01 - 7 Amaphepha
Inqanaba 3 uMyili
Iinketho ezi-2 zoYilo
Ii-imeyile zasimahla (ii-imeyile ezi-5 okanye i-5 GB)
07 - 12 Amaphepha
Iinketho ezi-3 zoYilo
Ungeniso olusisiseko kwi SE
$600.00 / inyanga
12 - 20 Amaphepha
Inqanaba 4 uMyili
Iinketho ezi-5 zoYilo
20 Imifanekiso etyikityiweyo
$ Masithethe ngomsebenzi okhethekileyo
UkuSebenza kweNjini yokuKhangela
Iiseva ezinikezelweyo kunye nezisombululo zefu
• Uhlalutyo oluyimfuneko: Ukuqonda iinjongo zabathengi, abaphulaphuli ekujoliswe kubo, izicelo zenkcazo eneenkcukacha kunye nokuqokelela ulwazi oluninzi njengoko sinokuqokelela.
Umgaqo weprojeki: Umnxibelelanisi weprojekthi ushwankathela ulwazi oluqokelelweyo kwaye kwavunyelwana ngalo kwinqaku elidlulileyo. La maxwebhu ahlala elifutshane kwaye akangobugcisa obugqithisileyo, kwaye asebenza njengesalathiso kuyo yonke iprojekthi.
• Imephu yesiza: Imephu yesiza enenkcukacha icwangcisiwe ethi kamva ibe kwisikhokelo, abasebenzisi bokuphela abanokuphulukana nesakhiwo okanye abafuna ulwazi ngokukhawuleza.
• Iikhontrakthi ezichaza iindima, ilungelo lokushicilela kunye namanqaku emali. Eli licandelo elibalulekileyo lamaxwebhu kwaye kufuneka libandakanye iimeko zokuhlawula, amagatya okuvalwa kweprojekthi, amagatya okuphelisa, ubunini belungelo lokushicilela kunye namaxesha. Lumka, uzikhusele ngesixwexwe, kodwa ungqibe kwaye usebenze ngokufanelekileyo.
Inqanaba loyilo ngokusisiseko limalunga nokuqhubela phambili ngolwazi oluchaziweyo kwinqanaba lokucwangcisa ukuya kwinyani. Ezona zinto zinikezelwayo sisakhiwo esenziwe amaxwebhu kwaye okona kubaluleke kakhulu, ukubonakaliswa okubonakalayo. Nje ukuba inqanaba loyilo ligqityiwe, iprojekthi ngakumbi okanye ngaphantsi sele ithathiwe, kodwa ngenxa yokungabikho komxholo kunye neempawu ezizodwa.
Isilayidi kunye nekhowudi esemthethweni ye-XHTML / CSS Lixesha lokufaka iikhowudi. Silayishe i-Photoshop mock-up, kwaye ubhale ikhowudi ye-HTML kunye ne-CSS kuyilo olusisiseko. Izinto ezisebenzayo kunye ne-jQuery ziza emva kwexesha: okwangoku, fumana nje izinto ezibonakalayo kwiscreen, kwaye uqiniseke ngokuqinisekisa yonke ikhowudi ngaphambi kokuba uqhubeke.
Iitemplate zekhowudi zodidi ngalunye lwephepha
Phuhlisa kwaye uvavanye amanqaku awodwa kunye nokusebenza ngaphakathi: Siyathanda ukukhathalela oku ngaphambi kokudibanisa umxholo we-tuli kuba iwebhusayithi ngoku ibonelela ngendawo yokusebenza ecocekileyo nengacocekanga.
Vavanya kwaye uqinisekise amakhonkco kunye nokusebenza: Ngoku sijonga kwakhona indawo usebenzisa umphathi wefayile yakho njengesikhokelo, uhambe ngayo yonke iphepha elilelweyo, elibandakanya, yonke into ukusuka kwiphepha lasekhaya ukuya kwiphepha lokuqinisekisa lokunikezela ukuqinisekisa ukuba yonke into isebenza kakuhle kwaye awuphosalanga nantoni na ngokubonakalayo okanye ngokusebenzayo.
Eyona njongo iphambili yesigaba sokuqalisa kukulungiselela le projekthi ukuze ijongwe luluntu. Oku kufuna ukugqalwa kokugqibela kwezinto zoyilo, ukuvavanywa okunzulu kokunxibelelana kunye neempawu kwaye okona kubaluleke kakhulu, kuthathelwa ingqalelo amava omsebenzisi.
Iipolishi: Iqela lethu lichonga iinxalenye zeprojekthi ezinokuthi ziphuculwe.
Ukudluliselwa kwiseva ephilayo: Ukuphononongwa kwethu ngomzuzu wokugqibela kweprojekthi ephilayo kuyenzeka ngoku.
Ukuvavanywa: Ngoku, siya kuqhuba i-diagnostic yokugqibela ukuze sisebenzise zonke izixhobo ezikhoyo: umkhangeli wokupela, abagunyazisi beekhowudi, itshekhi yezempilo kwiwebhusayithi, abakhangeli abaphukileyo, njl njl.
Ukukhangela isikhombisi kunye nokuphendula: Iqela lethu liza kujonga iprojekthi kwizikhangeli ezininzi njenge-IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari, iPhone, BlackBerry, njl.
Iinkonzo zethu ze-IT zinikezelwa kuluhlu olubanzi lwamashishini azo zonke iintlobo kunye nobukhulu. Sikhonza, phakathi kwezinye izinto, ngala mashishini alandelayo:
Amakhonkco asebenzisekayo kuYilo lweWebhusayithi